အမြန်လမ်းမှာ ကားတာယာတွေ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပွင့်ရလဲဆိုတာ အဖြေပေါ်ပါပြီ။ ကားသမားတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်နော် – WunYan
အမြန်လမ်းမှာ ကားတာယာတွေ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပွင့်ရလဲဆိုတာ အဖြေပေါ်ပါပြီ။ ကားသမားတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်နော်
ရန်ကုန် နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ကားတာယာတွေ ခဏခဏပွင့်ကြောင်း ကြားမိတာကြာပါပြီ။ အစကတော့ လမ်းက ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လို့ အလွယ်ပဲထင်မိပါတယ်. နောက်မှ ကျွန်တော့်ကားတာယာ လဲစဉ်က ဖတ်မိတာကိုသတိရပြီး သူငယ်ချင်းတို့လဲ သတိထားမိအောင် share ပေးလိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး တာယာဘေးက ရေးထားတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါဥပမာအနေနဲ့ P195/60R15 87S ဆိုပါစို့
1991 ခုနှစ်ကစတင်ပြီး တာယာတွေမှာ မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ကို အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း တသမတ်ထဲ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။အပ်ါက ဥပမာ P195/60R15 87S ဆိုရင်တော့
နောက်ဆုံးစာလုံးဖြစ်တဲ့ S ကို ကြည့်ပြီး ဒီတာယာအတွက် အမြန်ဆုံး မြန်နှုန်းခံနိုင်အားဟာ 112 mph ( 180 km/h) ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(PS: ပုံနှင့်စာက link ထဲကအတိုင်းကူးယူဖော်ပြပေးထားတာမို့အပြင်က ကားဘီးနဲ့ သာ ကြည့်ရှုလေ့လာပေးပါ။)
အမွနျလမျးမှာ ကားတာယာတှေ ဘယျလို အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ပှငျ့ရလဲဆိုတာ အဖွပေျေါပါပွီ။ ကားသမားတိုငျး သိထားသငျ့ပါတယျနျော
ရနျကုနျ နပွေညျတျော အမွနျလမျးမကွီးမှာ ကားတာယာတှေ ခဏခဏပှငျ့ကွောငျး ကွားမိတာကွာပါပွီ။ အစကတော့ လမျးက ကှနျကရဈလမျးဖွဈခွငျးကွောငျ့လို့ အလှယျပဲထငျမိပါတယျ. နောကျမှ ကြှနျတေျာ့ကားတာယာ လဲစဉျက ဖတျမိတာကိုသတိရပွီး သူငယျခငျြးတို့လဲ သတိထားမိအောငျ share ပေးလိုကျပါတယျ
အရငျဆုံး တာယာဘေးက ရေးထားတဲ့ ဂဏနျးတှကေို ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျပါဥပမာအနနေဲ့ P195/60R15 87S ဆိုပါစို့
1991 ခုနှဈကစတငျပွီး တာယာတှမှော မွနျနှုနျးကနျ့သတျခကျြကို အထကျပါ ပုံစံအတိုငျး တသမတျထဲ ဖျောပွထားကွပါတယျ။အပျါက ဥပမာ P195/60R15 87S ဆိုရငျတော့
နောကျဆုံးစာလုံးဖွဈတဲ့ S ကို ကွညျ့ပွီး ဒီတာယာအတှကျ အမွနျဆုံး မွနျနှုနျးခံနိုငျအားဟာ 112 mph ( 180 km/h) ဖွဈတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
(PS: ပုံနှငျ့စာက link ထဲကအတိုငျးကူးယူဖျောပွပေးထားတာမို့ အပွငျက ကားဘီးနဲ့သာ ကွညျ့ရှုလလေ့ာပေးပါ။)